केपी ओली पुगे बालकोट नि’वास, बरण्डाबाट हेरे उपस्थित जनसमुदाय ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 14, 2021 July 14, 2021 AdminLeaveaComment on केपी ओली पुगे बालकोट नि’वास, बरण्डाबाट हेरे उपस्थित जनसमुदाय ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर निजि निवास बालकोट प्र’स्थान गरेका छन् । पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ओलीलाई बालुवाटार देखि नै युथफो’र्सको स्कर्टिङमा बालकोट लागिएको हो । बिहान देखि जम्मा भएका युवाहरुले उनी बालुवाटारबाट निस्कँदा गेटदेखि नै ना’रा-जु’लुस सुरु गरेका थिए ।
उनि बालुवाटार छोड्ने बेलै मु’सलधारे पानी परेपछि युवाहरु कोहि र्यान्कोट त कोहि भिजेरै ओलीको स्क’र्टिङ गरेका छन । उनीहरुले ‘केपी ओली वि लब यु’ लगायतका नारा लगाउदै र ह’र्न बजाउदै अगाडी बढेका थिए । युथफो’र्सले हजारौ गाडी र बाइकको उपस्थिती हुने दावी गरेपनि सडकमा केहि दर्जन मात्र सवारी साधन देखिएको छ ।
तर उक्त समूह भक्तपुर पुगेर भने ठुलो संख्यामा परिणत भएको थियो । करिब १२ बजे आसपास बालुवाटार छोडेका केपी ओली डेड घण्टा पछी आफ्नो निवास बालकोट पुगेका छन । उनि त्यहाँ पुग्दा स्थानीयले फुल दिएर स्वागत गरेका थिए । भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस्:
यो पनि हेर्नुहोस् – देउवा सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय : ओली सरकारले कोरोना भाइरस सं’क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गरेको खर्च विवरण सार्बजनिक गर्ने ! शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भा’इरस सं’क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको हालसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मंगलबार साझा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
हालसम्म कोरोना भाइरस संक्र’मण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको ख’र्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । मन्त्रि कार्की सरकारका प्रवक्ता समेत हुन् । बैठकले आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।